Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguTeofil
Wamkelekile kwi-bungalow yethu ethandekayo, indawo onokuthi uqhawule kuyo, uphumle kwaye uziphathe "ngexesha lam", ngelixa usonwabela izibonelelo zawona mava akho okuhlala.
Xa size nombono weLotus Inn, sigqibe kwelokuba le iya kuba yeyona projekthi yethu ilungileyo ukuza kuthi ga ngoku, ukuze abantu abafana nawe bakwazi ukwenza uninzi lwamava abo okuphila. Ukusuka kwimixholo yemibala, iithayile zokuhlambela kunye nomgangatho, izixhobo zasekhitshini kunye nokuhonjiswa kwegumbi lokuhlala, ukuya kwibhedi yebhedi kunye nokukhanya kwangaphakathi, konke kuhloselwe ukwenza ukuba uzive kwaye unikeze amava okuhamba ahamba phambili 'ekhaya kude nekhaya' anokubonelela.
4.98 ·Izimvo eziyi-121
Sihlala kwindawo entsha, singqongwe ziintsapho ezininzi ezincinci kunye nabantwana bazo. Uya kuhlala ubona abantwana abancinci bedlala ezitratweni, bekhaba ibhola bejikeleza kwaye benandipha ubuntwana ... njengamaxesha akudala amnandi. Ukuba ukhetha ukuthula kunye nokuzola, emva kokuba uvale ucango emva kwakho, ukuyo kanye apho ufuna ukuba khona.
Kuba elona khaya sihlala kulo likwintendelezo enye, ngamanye amaxesha abantwana bethu baya kuhamba okanye badlale engceni ecaleni kwe-bungalow yakho. Iindwendwe zethu sizibona njengolwandiso losapho lwethu: ngamanye amaxesha siya kutya kunye, sibe nencoko encinci emnandi okanye senzele abantwana imarshmallow yetshokolethi.
Kuba elona khaya sihlala kulo likwintendelezo enye, ngamanye amaxesha abantwana bethu baya kuhamba okanye badlale engceni ecaleni kwe-bungalow yakho. Iindwendwe zethu sizibona njen…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sânmartin